admin – Shwe Burma
News "သတင္းမွားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာသတင္းသမ်ားအခ်င္းခ်င္းထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္" Posted by Pyi Myanmar on Saturday, November 24, 2018 “သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာသတင်းသများအချင်းချင်းထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်” source:Pyi Myanmar
ဘူဇွာဟိုတယ် [ Official Trailer ]
ချောင်းသာမှာ ဟိုတယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ဂျင်းကောင်မြင့်မြတ် ? ဝန်ထမ်းအစစ်မရှိဘဲ မိသားစုတွေချည်း အလုပ်ပြန်ခန့်ထားတဲ့ ” ဘူဇွာဟိုတယ် ” ကြီးမှာ မြင့်မြတ် တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ တိုင်ပတ်သလဲ ဆိုတာ ??? #ဘူဇွာဟိုတယ် ⛱⛱⛱ နိုဝင်ဘာ ( ၃၀ )မှစပြီး မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရုံတင်ပြသပါပြီ
ကားလမ်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဝေဖန်ရေးသား၍ ၆၆(ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်
မုဒုံ-သံဖြူဇရပ် ၃၇ မိုင်ကားလမ်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဝေဖန်ရေးသား သူကို ကုမ္ပဏီဘက်က ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင့် ယမန်နေ့၌ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း မော်လမြိုင် မုပွန်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ‘‘ကုမ္ပဏီရဲ့ကျော်ကြားမှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးမိုးက စခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားပါတယ်။ အမှုကို စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးသန့်ဇင်ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်’’ ဟု မုပွန်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ လမ်းပိုင်းကို အေးကို (မိသားစု)ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပ ဏီလီမိတက်က ဖောက်လုပ်ပြု… ဆက်လက်ဖက်ရှုရန်
မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည် နေရာချထားပေးမည့်အရေးနှင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီးမော်တွင် ဘင်္ဂါလီ ၃ဝဝဝ ကျော်အား ကမန်တိုင်းရင်းသားအမည်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးမှုတို့အား နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်၌ စစ်တွေမြို့တွင် ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ “ဘင်္ဂါလီကို ကမန်လို့ပြောနေတာ အစိုးရရဲ့ လိမ်လည်မှုပဲ။ ဒါဟာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ဖြစ်နေတာ၊ NLDအစိုးရက အာဏာတွေသုံးပြီး လုပ်လိုက်တာ။ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို စော်ကားလိုက်တာပဲ”ဟု ဆန္ဒပြရာတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ကျော့စိန်က ပြောသည်။ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ကျောက်နီမော် ကျေးရွာတွင် ကမန်တိုင်းရင်းသား ဦးရေ ၂ဝဝ… ဆက်လက်ဖက်ရှုရန်
အလုံမြို့နယ်ရှိ g & g စတိုးဆိုင်ထဲ လူငယ်သုံးဦးက ဝင်လုယက်
အလုံမြို့နယ်၊ ဌာနလမ်းထိပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် g & g စတိုးဆိုင်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် နံနက် ၁ နာရီခွဲဝန်းကျင်က အမည်မသိ လူငယ်သုံးဦးက ဝင်ရောက်ပြီး ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို ထိုးကြိတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆို၍ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ဆိုင်ရောင်းရငွေများကို လုယူခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။ ၂၄ နာရီ အရောင်းဆိုင်ဖြစ်သည် အဆိုပါ g & g စတိုးဆိုင်တွင် အခင်းဖြစ်ချိန်က ဆိုင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသားတစ်ဦးမှ အရောင်းတာဝန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဆိုင်အတွင်းသို့ အမည်မသိ လူငယ်သုံးဦးက… ဆက်လက်ဖက်ရှုရန်
ဗိုလ်ချုပ်ပုံအသုံးပြု၍ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေရန် ရေးသားခဲ့သူ မင်းမနိုင် အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံအသုံးပြု၍ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအရသော်လည်းကောင်း ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နစ်နာစေရန် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည့် Aung Ye Thwe (မင်းမနိုင်) အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံရသူ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အောင်ရဲသွေးမှာ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းသိမ်းဌာန၊ လမ်းဘေးဈေးသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပုတ်ပြတ်လုပ်သားတစ်ဦးစြဖ်ပြီး ၎င်းအသုံးပြုနေသည့် Aung Ye Thwe (မင်းမနိုင်) အကောင့်တွင် နိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြု၍ “လွတ်လပ်ရေးရအောင် အသက်စွန့်ကြိုးပစ်ခဲ့တယ်။ ငါ့သမီးလက်ထက်ရောက်မှ… ဆက်လက်ဖက်ရှုရန်
Total views : 20684